[Isikhungo se-Old Town of Lijiang Old Town + Vula njalo! Ukuthatha/ukushiya mahhala ubusuku obuthathu obulandelanayo + nenani elihle + eduze ne-Square Street Dashui imoto + ikamelo elikhulu eline-air-conditioned - I-Airbnb
[Isikhungo se-Old Town of Lijiang Old Town + Vula njalo! Ukuthatha/ukushiya mahhala ubusuku obuthathu obulandelanayo + nenani elihle + eduze ne-Square Street Dashui imoto + ikamelo elikhulu eline-air-conditioned
660 okushiwo abanye
Ikamelo e-i-kezhan ibungazwe ngu-阿牛
U-阿牛 Ungumbungazi ovelele
Indawo: amamitha angu-200 ukuya ku-Square Street enkabeni yedolobha lasendulo,
umgwaqo we-bar uhlobo lwefulethi: ukubuka ithala;
Ukuhlobisa: Isitayela se-Naxi; iklanywe futhi ihlotshiswe umnikazi wendlu; ifenisha ekhethwe umnikazi wendlu; umklami oyiphrofeshinali;
Izinsiza: Ifenisha ephelele nezinto zikagesi; izinto zasekhishini ezinakho konke; ilondolo nokupheka kuyatholakala; i-inthanethi esheshayo;
Isevisi: Isikhumulo sezindiza nesiteshi sesitimela ukulandwa nokuhanjiswa; amabalazwe okuhamba amahhala; ukuqashwa kwekhadi lebhasi; isidlo sasekuseni samahhala; ukuthenga ithikithi;
1. Othandekayo, ikamelo olibonayo manje yikamelo elingu-1, uma udinga umbhede omkhulu noma umbhede omncane, ungasazisa kusengaphambili!Ngokuqinisekile sizokwenza konke okusemandleni ethu! Ikamelo ngalinye linegumbi lokugezela langasese, i-air conditioning, isethi ephelele yezinto zokugeza, futhi ikamelo libulawa amagciwane nsuku zonke, ngakho-ke sicela uqiniseke.Umbhede u-1.8M ngo-2M! Ikhaya lethu linekamelo lokuphumula, ibha encane yencwadi, inkundla yokubuka esitezi sesibili, ungapholisa umoya wasebusuku kuvulandi ebusuku, [inyanga]
Sizokulungiselela isipho sokwamukela ngaphambi kokungena: amaqebelengwane ezimbali, amabhisikidi, izithelo ngenkathi yonyaka, uma udinga ukuthatha esikhumulweni sezindiza, sicela usazise kusengaphambili
4.96 out of 5 stars from 660 reviews
4.96 · 660 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-660
Indlu yezivakashi isendaweni esezansi kweNtaba yase-Greece edolobheni lasendulo lase-Lijiang!Uhamba imizuzu emihlanu ukusuka emgwaqeni omkhulu. Ezokuthutha ezitholakala kalula! Kunezindawo zokukhetha zokuheha ezihlukahlukene!Kusuka endlini yezivakashi kuya ku-Square Street enkabeni yedolobha lasendulo, uhambo lwemizuzu engu-35! Umgwaqo unele ngokubuka idolobha elidala.Indlu yezivakashi okumelwe ivakashelwe nakanjani! Kuthatha imizuzu cishe emithathu ukusuka endlini yezivakashi.Ungaya ku-Deck Rock Observation Deck. Ungabona yonke indawo yedolobha lasendulo. Kukhona izitolo ezilula, izindawo zokudlela, kanye nokudla okuhlukahlukene eduzane! Kulula ukudla, indawo yokuhlala, nezokuthutha!
Ngemuva kokuthi ukubhuka kube yimpumelelo, sizokuthinta futhi sikwazise ngesango eliseduze lokungena.Ungaxhumana nomshini wokuthatha nokukhipha.Emva kokufika ezimpambanweni zedolobha lasendulo, sizokubingelela futhi sikusize umthwalo wakho. Xhumana nawe nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi uhlala, futhi ungakwazi ukuhlela uhambo lwakho mahhala futhi unikeze imihlahlandlela yokuhamba.
Ngemuva kokuthi ukubhuka kube yimpumelelo, sizokuthinta futhi sikwazise ngesango eliseduze lokungena.Ungaxhumana nomshini wokuthatha nokukhipha.Emva kokufika ezimpambanweni zedolob…
U阿牛 Ungumbungazi ovelele